Lahatsoratra nataon'i Michael Ray ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Michael Ray
Star Wars dia mamaritra ny Hery ho zavatra mandehandeha amin'ny zavatra rehetra. Darth Vader dia miteny amintsika mba tsy hamaivanantsika azy io ary Obi-Wan dia nilaza tamin'i Luke fa mampifamatotra ny zava-drehetra izy io. Raha mijery ny tontolon'ny dokambarotra media sosialy, dia angona izay mamatotra ny zava-drehetra, mitaona ny famoronana, ny mpihaino, ny fandefasana hafatra, ny fotoana ary maro hafa. Ireto misy lesona vitsivitsy hanampy anao hahay hampiasa an'io hery io hanangana fampielezan-kevitra matanjaka kokoa. Lesona 1: Mifantoha amin'ny mazava